Mourinho oo la damacsan markale Guardiola dharbaaxo cusub ee ku aadan dhanka suuqa kadib heshiiskii Sanchez – Gool FM
(Man United) 24 Maajo 2018. Macalinka reer Portugal iyo kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa wuxuu halkiisa kasii wadaa loolanka adag uu kula jiro dhigiisa Pep Guardiola ee ku aadan ku guuleysiga koobka horyaalka Premier League xili ciyaareedka soo aadan.
Shabakada “Sky Sports” ayaa shaacisay in Mourinho uu ka afduubtay Alexis Sanchez kooxda Arsenal, inkastoo ay ku dhaweed saxiixiisa kooxda Manchester City uu hogaaminayay Guardiola.
Jose Mourinho ayaa ku soo laabtay markale in uu Pep Guardiola saxiixa xidiga reer Brazil ee kooxda Shakhtar Donetsk Fred.
Fred ayaa wuxuu si aad ah ugu dhawaa inuu u dhaqaaqo kooxda Manchester City suuqii kala iibsiga ee lasoo dhaafay, wuxuuna u arkaa Guardiola inuu yahay badalkiisa saxda ah xidiga ay isku dalka kasoo wada jeedaan ee ku sugan Skay Blues ee Fernandinho.
Mourinho ayaa rajeynaya inuu heshiiskan u dhameystiro kooxdiisa xiliyada dhaw ee soo aadan, wuxuuna rajeenayaa inuu dhameystiro kahor inta uusan bilaawan koobka aduunka ee bisha soo aadan ka furmi doona dalka Russia.